Maareeyaha Ololaha LinkedIn wuxuu sii daayay Khibraddiisa Ka Warbixinta Ololaha | Martech Zone
LinkedIn waxay ku dhawaaqeysaa khibrad warbixin dib u habeyn loogu talagalay Maareeyaha Ololaha LinkedIn, taasoo sahlaysa in la fahmo sida ololayaashaadu u socdaan. Xiriirinta cusub waxay soo bandhigeysaa khibrad nadiif ah oo dareen leh taas oo kuu oggolaaneysa inaad si fudud u maareyso oo aad u hagaajiso ololeyaashaada.
Wax-soo-saarka Maareeyaha Ololaha ee LinkedIn waxaa ka mid ah:
Waqti ku badbaadi warbixinta ololaha - Khibraddan warbixineed ee cusub, waxaad si dhakhso leh u arki kartaa sida ololayaashaadu u socdaan oo aad u sameyso hagaajin duulimaad ah si aad u horumariso natiijooyinka. Xogta ku jirta Maareeyaha Ololaha ayaa hadda si dhakhso leh u raraya 20 boqolkiiba, taas oo kuu oggolaaneysa inaad xogta si hufan u baarto - xitaa haddii aad leedahay boqolaal ololeyaal iyo hal-abuurnimo xayeysiis ah. Sidoo kale, qaab dhismeedka nab cusub ayaa kuu oggolaanaya inaad ka bedesho koontooyinka una ololeeyaan xayeysiinta laba guji. Waxaan sidoo kale cusbooneysiinay awoodaha raadinta, sidaa darteed waxay qaadataa dhowr ilbiriqsiyo ah in lagu weyddiiyo ololeyaal gaar ah magaca ololaha, Aqoonsiga ololaha, qaabka xayeysiinta iyo inbadan.
Fahmaan waxqabadka ololaha oo sifiican ugu iftiimi - Marka xayeysiiskaagu uusan si fiican u soconayn, waxaad u baahan tahay inaad si dhakhso leh wax uga qabato si aad u saxdo. Taasi waa sababta aan ugu darnay astaamo cusub oo kaa caawinaya inaad gaarto go'aannada ololaha si ka dhakhso badan sidii hore. Khibradda warbixinta cusub waxay ka kooban tahay 1-guji burburka oo ku siinaya aragti qoto dheer oo ku saabsan tilmaamayaasha muhiimka ah sida dhacdooyinka beddelka iyo meelaynta Shabakadda Dhageysiga ee LinkedIn.
Shakhsi u yeel khibradaada warbixin - Hadda waad dooran kartaa oo aad dooran kartaa aragtida cabbiraadda ee aad adigu aad ka taxadarto, hadday tahay Waxqabadka, Beddelka ama Muuqaalka.
Sida laga soo xigtay LinkedIn, sii deyntaani waa uun talaabada koowaad ee qorshaha wax soo saarka muddada-dheer.
Burcad Xayeysiis LinkedIn ah
Tags: warbixinta xayeysiiskaxayeysiisyada ku xiranxayeysiintamaareeyaha ololaha linkedin